Barnaamijyada sawir qaadista ee ugu fiican usbuuca | Warka Gadget
War gadget | 26/10/2021 19:29 | Sawir
Sawiradu waxay noqdeen habka ugu wanaagsan ee lagu dhimi karo safarada, cuntada qoyska, maalmaha dhalashada, xafladaha, maaraynta si loo badbaadiyo wakhtiga weligeed. Thanks to horumarinta tignoolajiyada, waxaa suurtagal ah in la horumariyo sawirada si dhakhso ah oo fudud. Maanta waxaan ku tusi doonaa codsiyada ugu fiican si aad u daabacdo xusuusta ugu fiican, iyo ka guriga hal codsi oo keliya.
1 Barnaamijyada usbuucan
1.2 Sida loo isticmaalo abka Hofmann?
Shirkadda ku guulaysatay inay ka mid noqoto madaxda suuqa, tan iyo 1923 ayaa wax cusub soo cusboonaatay oo dib isu soo celinaysay. Abuuraha Hofmann wuxuu ahaa Jarmal oo u cararay Valencia 1923, kor u qaadida ganacsiga sawir qaadista, bilaabay inuu abuuro albums dhaqameed, ma noqon doono ilaa 2005 markii ay bilaabeen waayo-aragnimada dhijitaalka ah, u oggolaanaya soo saarista albums dijital ah. Waqtigan xaadirka ah warshadu waxay ku sii socotaa Valencia waxayna sii wadaa sharad ku saabsan tignoolajiyada iyo sawir qaadista si Hofmann uu sii wado inuu noqdo hogaamiyaha alaabada sawirada.
Hofmann ma joojin hal-abuurnimada, oo hadda soo bandhigtay alaabo ka baxsan sawir-qaadista. Sidan, badeeco kasta ayaa lagu shakhsiyeynayaa dhowr dhagsi oo keliya: koobabka, boodhadhka, xujooyinka, rinjiyeynta. barkimo tayo sare leh, daboolo iyo albamo dhijitaal ah. Sannadkii 2013-kii codsiga mobilka ayaa suuqa soo galay taas oo kuu ogolaanaysa inaad abuurto xusuusta asalka ah si raaxo leh oo fudud. Kaliya waa inaad doorataa sawirka iyo badeecada aad rabto inaad abuurto. Sanadihii la soo dhaafay, barkimooyinku waxay noqdeen mid ka mid ah alaabta ugu caansan.
Sida loo isticmaalo abka Hofmann?
Hofmann waxay diyaar u tahay nooca Android iyo Apple labadaba. Ma aha codsi miisaankiisu aad u badan yahay, kaas oo u oggolaanaya in lagu soo dejiyo qalab kasta. Codsigu wuxuu kuu ogolaanayaa inaad daabacaadda sawirka, samee albam, samee jadwal, shakhsiyayso koob Muhiim ma aha in laga helo shabakadda moobilka, wax walba waa la samayn karaa, sidaas darteed si weyn u wanaajinaya khibradda isticmaalaha iyo kor u qaadida raaxada mar kasta. Waa mid ka mid ah Codsiyada ugu badan ee laga soo dejiyo Spain waxayna leedahay dhammaan alaabooyinka laga heli karo mareegaha. Ma jiraan wax xad ah, samee oo naqshadeeya markasta oo aad u baahato oo ka dhig xusuustaada wax lagu xasuusto.
Sanadihii la soo dhaafay, Hofmann wuxuu kaloo ku daray a qaybta hadiyadaha taas oo u oggolaanaysa macaamiisha inay ka doortaan tiro badan oo alaab ah oo la beddeli karo: ciyaaraha miiska, tuwaalada, bacaha musqulaha, boorsooyinka dhabarka ... Shirkadu waxay ku guulaysatay inay bixiso tiro alaabooyin ah oo la qabsanaya dalabka hadda jira. Intaa waxaa dheer, waxay leeyihiin saddex qaybood oo dhiirigelin ah oo ay ku bixiyaan maalmaha dhalashada, aroosyada ama asxaabta. Hadafka ayaa ah isticmaaluhu inuu helo hadiyadda ugu habboon.
La Hofmann-app leeyahay a interface aad u fudud oo qurux badan. Way fududahay in la dhex maro oo waa mid dareen badan leh, badeecad kasta si fudud ayaa loo helaa oo navigability-ga ayaa buuxinaysa dhammaan shuruudaha si aanu isticmaaluhu u lumin tallaabo kasta. Intaa waxaa dheer, waxaad ku kalsoonaan kartaa in Hofmann uu leeyahay tayada daabacaadda weyn ee sawirradiisa, markaa wax dhibaato ah ma yeelan doontid. Waxaad ku farxi doontaa badeecada aad codsato, Hofmann waxay la mid tahay tayo wanaagsan iyo shaqo wanaagsan.
Hofmann - Sawirada Albums
Cheerz waa mid kale oo ka mid ah shirkadaha hormuudka ah, sannadihii la soo dhaafay waxay heshay joogitaanka wax yar ee suuqa wada shaqayn weyn oo lala yeesho dadka saameeya. Warshadeedu waxay ku taal Paris. Waxa ay dhalatay 2012 ilaa iyo markaas ma aysan joojin abuurista iyo hal-abuurka, sharadka koox da’yar oo doonaysa in ay la wareegto adduunka. Isagu waa mid ka mid ah tartamayaasha Hofmann wuxuuna si dhow ula socdaa raadkiisa. Cheerz ayaa sidoo kale soo bandhigaysa tiro badan oo alaabooyin xiiso leh: sawiro, albums, sanduuqyada sawirada, magnets waxay ahaayeen alaabteeda xiddigaha oo ay weheliyaan jadwalka taariikhda.
Sannadkii ugu dambeeyay waxay beddeleen midabadooda iyagoo ku sharmaaya buluug iyo jaalle waxayna siiyeen maroojin sawirkooda astaanta ah. Waxa kale oo ay haystaan ​​codsi mobaylka oo la qabsanaya qalab kasta oo ogolaanaya iibso alaabtaada si fudud oo ku haboon. Way fududahay in la isticmaalo oo la galo sida shabakadaada, taas oo kuu ogolaanaysa inaad daabacdo dhammaan sawirada aad uga baahan tahay moobilkaaga oo aad abuurto badeecad gaar ah. Isku day arjiga oo arag dhammaan alaabooyinka ay hayaan iyo tayadooda sare.
Freeprints waxay ku taal Texas, laakiin caalami ahaan waxay ku xiran tahay inta badan adduunka. Waxay leedahay codsi fudud oo si fudud loo isticmaali karo, oggolow ka daabac sawir kasta oo mobilada ah. Waa mid kale oo ka mid ah shirkadaha noqday karti Hofmann, wuxuu kuu ogolaanayaa inaad daabacdo 45 sawir oo bilaash ah bishiiba, kaliya waa inaad bixisaa kharashka gaadiidka. Guud ahaan waxaa jira 500 sawir oo bilaash ah sanadka oo dhan.
Soo deji codsiyadan oo isku day midka ugu habboon baahiyahaaga, mid hayso codsiga mobile wuxuu ka dhigayaa habka daabacaadda mid aad u firfircoon. Wixii warar ah ee kusoo kordha dib ayaan idiinka soo gudbin doonaa qormada xigta Christmas waa dhow yahay, waxaad weli heli kartaa hadiyadda ugu fiican.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Sawir iyo dhawaq » Sawir » Barnaamijyada sawir qaadista ee ugu fiican usbuuca